Ungayilandela njani uyilo olutsha lukaSemalt kwaye ulisebenzise ekumgangatho ophezulu kuGoogle
Kuthatha i-50 milliseconds yabasebenzisi ukuphuhlisa uluvo lwewebhusayithi yakho. Abasebenzisi bafuna indlela elula yokuyisebenzisa kwiisayithi zabo. Ngelixa oku kuyicebiso elilungileyo kwinkalo enye yewebhusayithi yakho, uSemalt uyisebenzise le nto kwiwebhusayithi yabo entsha.
Iphepha elitsha lewebhu likaSemalt lifuna ukudibanisa into ejijekileyo, uyilo lwale mihla kunye nokufundeka ngokulula. Ngolu luyilo, uSemalt wenze ukuba kube lula ukuqonda ukuba bangakufumana njani na kwi-Google ephezulu.
Uphononongo olukhawulezileyo lwe-SEO sigama
Ngaphambi kokuba siye kude kakhulu kwinyama yesihloko, kubalulekile ukuba sibe nokuqonda ngokubanzi kwezinye zebhotoni eziyimfuneko. Ibhlog yethu inesikhokelo esibanzi kwi-SEO ukuba unqwenela ukumba ngokunzulu kwiziseko. Kweli bali, siza kudlula kwezinye iinkcazo ezisisiseko.
I-SEO imele ukuSebenza kweNjini yokuKhangela. Yinkqubo yokwenza iwebhusayithi yakho ibe lula ukukhangela kwi-intanethi.
I-AutoSEO yimveliso ekhutshwe ngu-Semalt eyenzelwe abo bafuna ukungena kwi-SEO ngaphandle kokutyala imali eninzi.
I-FullSEO yinguqulelo ephezulu ye-AutoSEO egxininisa ukusebenza ngeNgcali ye-SEO kunye nomphathi.
I-SSL yinto yokhuseleko eyenza idatha yabathengi egcinwe kwiwebhusayithi yakho ikhuseleke ngakumbi.
Amagama aphambili ngamagama athile okanye amabinzana abantu anokukhangela xa befumana iwebhusayithi yakho.
Isikhundla sesiphi isikhundla iphepha lakho, okanye igama eliphambili, elivelayo kwi-injini yokukhangela.
I-traffic linani labantu abatyelele indawo yakho.
I-AutoSEO, i-FullSEO, kunye ne-SSL zisesezixhobo ezisetyenziswa nguSemalt ukutyhala indawo yakho. Njengoko kuchaziwe kwibhlog yethu yangaphambili kwisihloko, zonke ezi mveliso ziqinisekisiweyo ezinerekhodi yokuphumelela kwempumelelo. Ukuba unqwenela ukufumana ulwazi ngakumbi kulayini lwemveliso, nceda ujonge iposi endala.
Kule blog, siza kugxila ekukhangeleni amanqaku amatsha kunye nezinto eziyilo lewebhusayithi entsha. I-Semalt iphumeze ezinye iimpawu ezinomtsalane ezifanele ukugqitha.
Amaphepha eZiphumo zeNjini yokuKhangela (i-SERP)
Jonga ubunye bephepha
Zabalawuli beWebhu kaGoogle
Ukuqonda idashboard entsha ye-Semalt
Idashboard entsha isenezinto ezininzi zeefilitha ezinamandla ukusuka kweyokuqala. Umahluko obalulekileyo uvela kutshintsho kunxibelelwano olugxininisa iimfuno zomsebenzisi.
Xa usiya ezantsi, uyakuqaphela ukuba mangaphi amagama akho aphambili aphezulu, u-1, 10, 30 kunye no-100. Le dashboard ikunika umbono wokuba yeyiphi eyona nto iphambili oyenzayo. Ungalusebenzisa olu lwazi ukugxininisa amagama athile angafunekiyo.
Unokufumanisa ukuba iseti yamagama aphambili aluncedo ngakumbi ekuziseni ukuthengisa okuguqukayo kwiwebhusayithi yakho. Ideshibhodi ye-SEO kaSemalt inokukunceda uchaze ukuba zeziphi amagama aphambili anokuzisa ukugcwala ngakumbi. Ukudityaniswa nedatha kwinani leetransekshini kwiwebhusayithi yakho, unokufumana ukuba utsala uhlobo olungelulo lwezithuthi.
Ukuqonda iphepha leNjini yokuKhangela (i-SERP)
Iphepha leNjini yokuKhangela linika ulwazi oluneenkcukacha malunga nephepha lewebhu lakho kwinqanaba lokusetsha. Ukunika ulwazi oluneenkcukacha malunga nokuba yeyiphi amagama abekwe kwinqanaba kunye nendlela ekhokelela kwiphepha lakho. Ikwabonelela ngolwazi olungafunyanwanga nezinye iiwebhusayithi ezininzi ze-SEO: ulwazi kubancintisana nabo.
Unokuthatha isigqibo sokumisela lo mzekelo ngokuthelekisa ngenjini oyikhethileyo. UGoogle yeyona nombolo yokukhangela yokuqala ehlabathini, kodwa ukuba ufumana ababukeli ngokusebenzisa i-Yahoo okanye i-Bing, unokufumana amagama aphambili kwinqanaba lokuma ngcono phaya. Unokufuna ukwenza iphulo elifuna ukubetha abakhuphisana nawe kuzo zontathu iinjini.
Xa ujonga i-SEO, uSemalt uyaqonda ukuba idatha yinto yonke. Iinkampani ezininzi ziya kukuncedisa ekwenzeni iiprojekthi zeGoogle AdWords, kodwa esi sisisombululo sexesha elifutshane. Iintengiso aziyi kuphucula ukukhangela kwendawo yakho ekuhambeni kwexesha, kodwa zikunike amandla okwethutyana aphela ngemali. Iiwebhusayithi ezakhiwe nge-SEO engqondweni ngokwendalo zabetha eziphezulu zala maphepha kwaye ziya kuqhubeka zibekwa kwinqanaba eliphezulu ngokulungiswa rhoqo.
Yintoni uHlaziyo loBumbano lwephepha?
I-SEO yinto edla ngokufuna ukuba ube nobuchule obahlukileyo ngelixa ikwafana nabantu abakhuphisana nawe ababeka amagama aphambili.
Ababhali be-SEO abaqeqeshiweyo be-Semalt bayawubona lo mbandela ngokubonelela ngamagama aphambili azizikhundla eziya kuthi zibonelele ababhali abanokubhala umxholo okhethekileyo. I-SEO yintsalela ebuthathaka, kodwa uSemalt sele enamatyala athetha ngokuphumelela.
Umzekelo, masithi ubengumbhali wenkululeko yokuzimela owayengena nje eshishini, kodwa udinga uncedo oluncinci ukuze iphepha lakho libe kwinqanaba. Apha ngezantsi kukho icwecwe elincinci elivela kwiphepha lakho elalitshekishwa yindawo yokujonga iphepha elingafaniyo lewebhusayithi entsha ye-Semalt.
Uya kuqaphela ukuba kukho amanqaku aphezulu ngaphezulu kwiphepha. Emva kokuyiqhuba ngokujonga umxholo, iye yaqonda ukuba la macandelo akwezinye iindawo kwiwebhu. Ngenxa yoko, imeko yeli phepha likumanqanaba ali-13 eepesenti.
I-injini yokukhangela inokwenzeka ukuba ibeke umxholo ukuba ithathwa njengegunyazisiweyo okanye ngumthombo othembekileyo. Enye indlela enjini yokukhangela egqiba ngayo kukungafani kwezinto. Ngelixa i-SEO izimisele ukujonga amagama aphambili afanelekileyo, ekunokuthi nawo onke amasayithi abelane, iwebhusayithi engakwaziyo ukuvela phakathi kwesihlwele iya kuqhubeka nokuma kakubi.
I-Semalt yinkampani eyaziyo le nto. Ngokudibanisa oku kunye ne-SERP yethu, sinokuthi sigqibe ngempumelelo ukuba ngaba utshintsho lwesicwangciso luyimfuneko na okanye hayi. Unokufanelekela ngokwaneleyo ukuba ubekwe kwinqanaba eliphezulu kwi-100 ngokuthathela ingqalelo okuncinci kule nto. Ukanti, ishumi eliphambili liya kufuna ishishini lakho ukuba lahluke ngokujolisa kumagama athile asisiseko kunye nomxholo owahlukileyo.
Ukulandelela iGoogle Webmasters ngeSemalt
Njengenye yeenkampani ezinkulu ehlabathini, usenokuba sele uyazi ukuba uGoogle unezixhobo ezininzi zokubeka esweni ukusebenza. USemalt ujonge ukongeza loo msebenzi ngokusebenzisa iqela leengcali ze-SEO kunye nabaphathi ukukhuthaza oku. Okwangoku, kwabo sele bengaphantsi kwenkqubo ye-webmaster , uSemalt unesisombululo nakuwe.
Ngokukhuphela ifayile ye-HTML kwiwebhusayithi yabo kwaye uyifaka kwiwebhusayithi yakho, uSemalt unokulandela idatha eneenkcukacha ezininzi. Unokukhetha nokuncamathisela i-HTML kwindawo yakho. Ukuba unayo nakuphi na ukudideka malunga nale nkqubo, zive ukhululekile ukufikelela kwi- imeyile yenkxaso yabo. Ukuba ukhetha elinye ijelo, iinkcukacha zonxibelelwano zisezantsi kwephepha ngalinye.
Kwakhona, ukulayisha idatha ngokuthe ngqo kwi-Semalt kunciphisa inani leendawo apho ugcine khona idatha yakho. Ngaphambi koku, unokuba unedeshbhodi enye yewebhusayithi yakho, iphaneli enye yokuhlaziywa kwegama elingaphezulu, kunye nenye yedatha yemephu. NgeSemalt, yonke loo nto ikwindawo enye.
Ukuhlaziywa kwesantya sephepha kunye nendlela ezinokuthi ziyichaphazele ngayo i-SEO yakho
Xa kuziwa kwi-SEO, ngokuqinisekileyo ungacingi ngesantya sephepha lakho ukuba unayo nayiphi na impembelelo ebalulekileyo. Nangona kunjalo, umgangatho wokulayisha wephepha lakho unempembelelo ebonakalayo kwi-SEO.
Isitshixo likwigama elithi "optimization," indawo eyenziwe kakuhle yenye yeendawo ezingenanto zokuqhawula amakhonkco, iilogo kunye nemithwalo ngokukhawuleza. Xa iqela likaSemalt leengcali ze-SEO linokufikelela kwiwebhusayithi, uhlalutyo lwabo luya kutyhila la manqaku aphukileyo kwaye baqinisekise ukuba kuphela umthwalo ofanelekileyo wolwazi kumthengi.
Ngenxa yokuba la manani ngaphambili abantu benesithuba esiyi-50-millisecond span, kubalulekile ukuba nephepha elikhawulezayo ekufundeka lula. Apha ngezantsi kukho idashboard oza kuyisebenzisa ukulandela isantya sakho.
Njengoko ubona, umzekelo wephepha esilisebenzisayo lihle kakhulu. Ineziphoso ezimbalwa ezincinci onokuzilandelela, kodwa ezo zinokuba zindawo zokuguqula ezinye iintengiso ezinokubakho. Nangona kunjalo, le dashboard ithe ngqo kuhlobo lwe desktop. Ukuba sijonga ingxelo yeli phepha lewebhu, kuyakuveza into eyahlukileyo.
Ngeepesenti ezingama-81 zabantu baseMelika abasebenzisa ii-smartphones, kuya kufuneka uqaphele isidingo sokusebenza kweselula. Umzekelo ongentla uxela ukuba le webhusayithi iphakathi kunye nabantu abakhuphisana nabo. Nangona kunjalo, uSemalt usebenza ngokuthatha ngaphezulu kwe-avareji.
Idashboard entsha kaSemalt ingandinceda njani ukuba ndiye eqongeni likaGoogle?
Isixa sedatha oyisebenzisa yonke imihla iyangqineka. Ngenxa yoko akunakuba nakho ukuqhubekeka nokuhla kwemihla ngemihla. Xa udibanisa imisebenzi yakho eqhelekileyo njengomnini kunye nokulawula iwebhusayithi, ezi zimbini ziya kuphazamisa omnye komnye.
Inkqubo ye-Semalt yindlela yokwenza lula inkqubo yokulawulwa kwesiza ngendlela apho unokuthi ujolise ingqalelo yakho apho kufuneka ibe khona: ishishini lakho. Kunye neqela labazinikeleyo likaSemalt elonwabileyo ukukukhokela kwi-SEO, uya kuzifumana uphakathi kweGoogle.
Ideshibhodi sisiphumo sikaSemalt senkqubo yokuqonda into efunwa ngumthengi. Ngenkqubo elula, sifuna ukuqiniseka ukuba awufumani kuphela uhlaziyo rhoqo kulawulo lwephulo lakho le-SEO, kodwa uyakuqonda kwaye uyakuqonda ukukhula okulethwa leli phulo kwishishini lakho.
Ukuba ungumnini weshishini kwaye unqwenela ukubandakanyeka kwitrafikhi, uSemalt ukulungele ukukusa kwindawo apho unokuthi ubambe itrafikhi, ukubandakanyeka kumthengi kunye nokwandisa ukuthengisa.